नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ झण्डा टर्मिनलमै फहराइएको छ !
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ झण्डा टर्मिनलमै फहराइएको छ !
काठमाडौ । यो देखिएको दृष्य नेपालको विश्वको ध्यान तानिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको हो ।
हेर्दा तपाई जो कोहीलाई चिनियाँ भूभाग हो की भन्ने लागेको हुनुपर्छ किनकी यहाँ देखिएको झण्डा चीनको हो ।
झट्ट हेर्दा यो कुनै चीनको भू–भाग जस्तो देखिन्छ । तर, यो नेपालको भूभागमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो जहाँ चिनियाँ झण्डा टर्मिनलमै फहराइएको छ । Chinese flag hoisted at Nepal’s international airport terminal
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मीनल भवनमा चिनियाँ झण्डा राखिएको पाइएको हो। ६ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निमार्ण गरेको उक्त विमानस्थलमा चिनियाँ झण्डा राखिएको पाइएको हो।
टर्मिनलमै चिनियाँ झण्डा राखेर चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व प्रदर्शन गर्न थालेको छ । चिनियाँ झण्डा नेपालको विमानस्थलको टर्मिनलमा राखेपछि विरोध हुन थालेको छ । तर, सरकारले भने यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार साढे दुई अर्ब रुपैयाँको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। बुद्धको उक्त मूर्ति बहुमूल्य धातु ह्वाइट जेडबाट बनाइएको हो। म्यानमारमा बनाइएको मूर्ति स्पेनको लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसनले विमानस्थललाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो ।
उक्त मूर्तिलाई विमानस्थलको प्रवेशद्वार र बाहिरिने मार्गमा पर्ने गरी राखिएको छ। उक्त मूर्ति स्थापना गर्नुअघि नै विमानस्थलको टर्मीनल भवनको छतमा चिनियाँ झण्डा फहराइएको पाइएको छ।